Lentil: Ndeapi mabhenefiti? Ungadya sei? Tarisa pano!
Zvokudya	 17 January 2019
Pakupera kwegore, kudyiwa kwembesa kunozivikanwa kwazvo neEvha yeGore Idzva, asi zvakare inoshandiswa zvakanaka paKisimusi. Pamusoro pekuva noutano hwakanaka, hunonaka, hunovaka muviri, nyemba dzine zvadzinoreva, izvo zvinoita kuti zvishandiswe zvakanyanya panguva ino yegore.
Mune inotevera misoro iwe unodzidza nezvemhando huru dzenzungu, mashandisiro avanofanira kuita, ziva tafura yezvikafu uye rumwe ruzivo rwakanangana nezve izvi zvinonaka. Buda!
Lentili zviyo, zviyo, zvine zvivakwa zvakafanana zvikuru nebhinzi, kunyangwe ichigadzirirwa neimwe nzira yakati siyanei.
Kungofanana nebhinzi, kune mhando dzinoverengeka dzedhiri dzakakamurwa nemuvara. Iyo inowanzozivikanwa ndeye brown, kazhinji paNyika Idzva uye madhiri eKisimusi, asi handiyo yega.
Pamusoro pebrown, pane tsvuku, girini, nhema, yero uye orenji. Kune akawanda marudzi uye musiyano mudiki pakati pawo, kunze kwediki diki mune hwekunaka.
Kubatsira kwemavara uye mhando ndekwekuti iwe unogona kupenda chikafu chako chemanheru kana ndiro yako. Shandisa inopfuura imwechete yerudzi rweyemba kana yekusiyanisa ndiro kubva pane rakasarudzwa ruvara.
Onawo kukosha kwekushandisa basil!
Lentili dzinowanikwa mune chikamu chezviyo muzvitoro, padyo nebhinzi nemupunga uye zvinowanzoita 3 kusvika ku5 reais kirogiramu. Iyo padyo nenguva yezororo yainowana, iyo inodhura zvakanyanya.
Mune masupamaketi akajairika, unogona chete kuwana shava, rinova iro rakajairika. Iwo mamwe marudzi anowanzoitika mune mamwe masupamaketi ane hunyanzvi, ane zviyo uye zvimwe zvigadzirwa zvakasiyana.
Aya mavara, akasiyana zvakanyanya, ane zvakare kukosha kwakanyanya kupfuura brown, iyo iri yakachipa pasi peyakajairika inflation uye mamiriro ekukohwa.
Iko hakuna kushomeka kwemaresipi etsitsi. Inowanzo shumirwa pamwe chete nemupunga, uyo unoipa iyo yakanyanya kusimba, pamwe nekugadzirwa kwakanaka, sezvo nyemba dzakaomarara kupfuura mupunga, kunyangwe kana dzabikwa.
Mamwe mapapiro akajairika ndeyekuwedzera marisita ane mavara kumasaradhi. Zvakanaka kuibika kutanga, kunyangwe iwe uchida zvimwe al dente, inonaka kwazvo, kana yakarungwa nemazvo uye ichipa yakanaka inonaka dhishi.
Iko zvakare kune muto we lentiy uyo unogona kupihwa nenyama kana kungori nemwaka. Sarudzo huru, kunyanya kwemazuva anotonhora.
Lentili dzakapfuma kwazvo mumapuroteni. Pane izvo zvinonzi zvakakosha amino acids, ayo ari iwo asina kuburitswa nemuviri, pane makumi maviri aripo, ane 20. Uyezve, zvakare yakafuma mune fiber uye yakadzika kwazvo mumafuta, yakakosha kune hutano, mwenje uye kudya kwakadzikama.
Iine vhitamini B6 yakawanda uye folic acid, inova yakanaka kune hutano hwemukadzi. Iyo ine yakawanda makabhohaidhiretsi zvakare, asi mazhinji acho ndeye fiber, akanaka makabhohaidhiretsi, ayo anopedza uye haatore mafuta emuviri.
Iine mapuroteni here?
Lentili dzine anenge maamino acid akakosha anodiwa nemuviri wemunhu. Mune mamwe mazwi, yakapfuma kwazvo muprotein, ingangoita gumi muzana yenzungu dzese mapuroteni, zvakanyanya kudarika zvimwe nyama.
Hongu, ingangoita makumi maviri muzana ezviuru zvine makabhohaidhiretsi, sezvakaita zvimwe zviyo. Musiyano uripo ndewekuti makabhohaidhiretsi anouya kubva mukudya fiber, iyo inobatsira mukubvisa mafuta, shuga, kudzora ura uye, nekudaro, kuonda.
Ehe, inofanirwa kudyiwa nehanya, pasina kuwedzeredza. Kana iwe uchidya huwandu hwakawanda hwembiru zuva rega rega, pane kudzikira huremu uye uchizviita zvakanaka, zvinokukodza. Naizvozvo, zvinogara zvakanaka kutsikirira kiyi yekudyidzana, kudya zvine hutano, zvishoma chechinhu chimwe nechimwe kudzivirira kuwedzeredza uye matambudziko anounzwa navo.
Icho chikafu chakapfuma kwazvo chinoita kuti kudya kwako kuve noutano uyezve kuunza rombo uye kubudirira kumhemberero dzako dzeGore Idzva. Kana iwe uchine chero mibvunzo nezve nyemba uye mashandisiro avo, siya mhinduro pazasi!
Kudya kweBeet: Tsvaga mabhenefiti uye kana achinyatsoshanda!
Pholia Magra: Dzidza zvakawanda nezvekuwanikwa uku kwesainzi yeBrazil
Endometriosis: Dzidza Maitiro Ekudzivirira!
6 maapplication ekurangarira kunwa mvura!
Tea dzekudzora chirungurira: Ona zvakanakisa